Mazita Emhuka muGerman, Mhuka kuGerman
Mhuka dzeGerman, mazita emhuka dzeGerman
Shamwari dzinodiwa, tichaona musoro wenyaya wechiGerman muchidzidzo chino. Isu tichapa runyorwa rwemazita emhuka muchiGerman uye tinyore zvadzinoreva muchiTurkey. Kuwanda kwemazita emhuka aunodzidza, zvinonyanya kubatsira kwauri kuti utaure chiGerman zvakanyanya uye nekuwedzera mitsara yechiGerman iwe yaunogona kumisikidza.
Shumba = der Löwe
Octopus = kufa Krake
Antelope = kufa Antipope
Cicada = kufa Zikade
Nenyuchi = kufa Biene
Pisces = der Fisch
Ow = kufa Eule
Ceylan = kufa gaselle
Cricket = kufa Grille
Grasshopper = kufa Heuschrecke
Gomo Mouse = das Murmeltier
Ngamera = das Kamel
Nguruve = das Schwein
Nguruve = das Ferkel
Mouse = kufa Maus
Firi = der Elefant
Mhuka = ​​das Tier
Cow = kufa Kuh
Kaka = kufa Katze
Shiri = der Vogel
Imbwa = der Hund
Mbudzi = kufa Ziege
Dhimoni = kufa Eidechse
Makwai = das Schaf
Ant = kufa Ameise
Soroke = der Storch
Bheni = kufa Ente
Snail = kufa Schnecke
Gwekwe = kufa Eichhörnchen
Panya = kufa Maus
Mushonga = kufa Stechmücke
Fly = kufa Fliege
Nyoka = kufa Schlange
Girafu = kufa Giraffe
German chimi mazitaGerman animals
Narcissus anodaro 9 apfuura
Zvingave zviri nani kana paine tsananguro iri nyore, isu hatizivi chiGerman nekuzvarwa ... 🙂
ezes baran eds anodaro 8 apfuura
German anodaro 8 apfuura
ZVAKANGA ZVAKANAKA KANA NDICHITSVAGA CHINHU KUBVA KUJERUMANI NDINOPINDA INO SATI INONYANYA.
zviri nyore kwauri anodaro 7 apfuura
gereza rinobatsira kwazvo pane ino saiti
nyore kutora anodaro 7 apfuura
gs anodaro 6 apfuura
inobatsira zvikuru tk
Dimple anodaro 6 apfuura
Saiti iyi yakanaka?
rwizi runogona anodaro 6 apfuura
hongu asi zvakaoma zvikuru kana izvi zvinyorwa zvechi German
site jeans nguva dzose dzinofananidzwa nevamwe 1 kubata mimwe mazuva 2 inobatwa mumusoro mumaminitsi mashomanana
BTS_armY anodaro 2 ago
iwe idiot iyi ndiyo comment yako
Sofi anodaro 5 apfuura
Kwete, handina shiri iyo pasi.
almancax anodaro 5 apfuura
Takazviwedzera pakarepo, tichida nekuda kwekufarira kwako.
zvakasiyana chaizvo oooo * - *
Kana pakanga pane kuverenga
upenyu anodaro 4 apfuura
Coola anoonga kwazvo
Sule anodaro 4 apfuura
Ndinokutendai nokuda kwemazita ezvipfuwo zveGermany.
Shamwari kuchikoro pakarepo
Zvakanaka, asi ndinoshuva kuti dai chiri chipembere kana chimwe chinhu (mhuka dzakasiyana)
mahmut anodaro 2 ago
What does the twiza mean in German, handina kuzviona